၈.၅ လက်မဘီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူလျှပ်စစ်စကူတာထုတ်လုပ်သူ - Xiangyou
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လူကြီးလျှပ်စစ် Scooter > 8.5 လက်မဘီးအရွယ်ရောက်လျှပ်စစ် Scooter
8.5 inch wheel 8.5 လက်မဘီးအရွယ်ရောက်လျှပ်စစ် Scooter with 30 kilometers long battery life, automobile-powered lithium battery, six intelligent protections.
မြင့်မားသောနှုန်းနှင့်စွမ်းအားမြင့်ထောက်ပံ့ခြင်း၊ တီထွင်ထားသောလီသီယမ်ဘက်ထရီတိုင်တိုင်၊ ရေစိုခံစွမ်းဆောင်ရည်၊ မိုးရာသီတွင်လုံခြုံစိတ်ချရသောစီးနင်းမှု၊ မြင့်မားသောကိုယ်ထည်၊ ဖြတ်ကျော်နိုင်မှု၊ ဘက်ထရီကိုမပျက်စီးစေဘဲအတားအဆီးများဖြစ်စေခြင်းဖြင့်ခြေနင်းသည်ဆေးကြောခြင်းကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။
: 14.2 ကီလိုဂရမ်
လှန်လှည့်, ခေါက်, နှင့်ညှပ်။
8.5 လက်မဘီးအရွယ်ရောက်လျှပ်စစ် Scooter can be folded in3simple steps
ခေါက်ထားသည့်ခလုတ်ကိုအောက်သို့ဆွဲတင်လိုက်ရုံနှင့်နောက်ဘီး၏တံခါးပေါ်တွင်စကူတာခေါင်းလောင်းသည်ကပ်နေလိမ့်မည်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်း။ လုံခြုံသောခေါက်နိုင်သောဒီဇိုင်းသည်လျှပ်စစ်စကူတာကိုအိမ်၊ ရုံးသို့မဟုတ်ကားပင်စည်များတွင်သိုလှောင်ရန်အလွန်သင့်တော်သည်။
၁) ရှေ့ e-brake၊ နောက်ခြေထောက်ဘရိတ်
၂) မြန်နှုန်း ၃ ဆင့် (20KM / 30KM / 35KM / 35)
၃။ ခေါက်သိမ်းနိုင်သောလက်ကိုင်၊ ချိန်ညှိနိုင်သောအမြင့်
၄။ Scooter အမြန်နှုန်း / မိုင်အကွာအဝေး / အခြေအနေကိုပြသရန်အရောင်အသွေးရှိသော LCD display
၅) App function
8.5 လက်မဘီးအရွယ်ရောက်လျှပ်စစ် Scooter with LED display
၅ ။Product Qualification of 8.5 လက်မဘီးအရွယ်ရောက်လျှပ်စစ် Scooter
Vapaa-001 8.5 inch wheel 8.5 လက်မဘီးအရွယ်ရောက်လျှပ်စစ် Scooter , passed EMC/LVD/EN15194/EN14619/MSDS/UN38.3 certification.
6.Deliver,Shipping And Serving of 8.5 လက်မဘီးအရွယ်ရောက်လျှပ်စစ် Scooter
A3: Generally, we pack the 8.5 လက်မဘီးအရွယ်ရောက်လျှပ်စစ် Scooter in carton box with thick foam board inside for protection.
hot Tags:: ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်း၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်း၊ အမြောက်အများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ပုံစံအသစ်၊ Hot Sale, ၂၀၂၀ ခေါက်သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်း၊ မူရင်းအသစ်၊ OEM စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားခြင်း၊ တရုတ်၊ Eu ဂိုဒေါင်, တရုတ်စက်ရုံ, ဥရောပကုန်လှောင်ရုံ, Eu ကုန်ပစ္စည်း, စျေးပေါ, လျှော့စျေး, အနိမ့်စျေး, လျှော့စျေး, စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်းစာရင်း, စျေးနှုန်း, CE, ဖက်ရှင်, နောက်ဆုံးပေါ်, အရည်အသွေး, အဆင့်မြင့်, အကြမ်းခံ, လွယ်ကူသော - ထိန်းသိမ်းထား, နောက်ဆုံးရောင်း, တစ်နှစ် အာမခံ၊ အမျိုးအစား၊ ဖန်စီ၊ အိတ်ဆောင်၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ ခေါက်သိမ်းနိုင်သော, UL အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊
လူကြီးများအတွက် Adjustments Electric Scooter
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ 8.5 လက်မလျှပ်စစ် Scooter
Dual Motor လူကြီးလျှပ်စစ် Scooter
2 ဘီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူလျှပ်စစ် Scooter
အရွယ်ရောက်ပြီးသူလျှပ်စစ် Scooter Kick